Kafog Siyaasad, Imisa Jir Ayaad Tahay?, W/Q: Maxamed Maxamud Ciise
Haddaba waxa la is weydiin karaa intee in leeg ayeynu leenahay dareen caadifadeed ama siduu u bixiyey aqoonyahan Howard Gardne emotional
Waxan u mahad naqayaaa ilaaha ii suurtagaliyay inaan maqaaladan oo taxane ah lawadaago umadda islaamka ah marka labaad waxan u mahadnaqayaa bahda warbaahinta madaxa banaan.
Dadka qaar ayaa isku haysta inay maskax badan yihiin halka dadka qaarna ay isku haystaan inaanay ku jirin dadka maskaxda badan, labada arrimoodba waxay u baahan yihiiin in la hubiyo, waxase meesha ku jirta in qof kasta oo dadka ka mid ah u leeyahay maskax badnaan u gaar ah oo u kaga soocan yahay dadka intooda kale sida u sheegay aqoonyahan Howard Gardne markii u ka waramay kala duwanaanshaha maskaxda dadka
proff. Howard Gardne oo u bixiyey aragtidiisa MULTIPLE INTELLIGENCY THEORY oo aan soo
tarjumay wuxuu sheegay inay dadku leeyihiin maskax badnaan kala duwan oo ku kala baahsan ama ay kula xidhiidhaan meelo ay ka mid yihiin hadalka, maqalka,dabeecada, dadka kale, muusiga, ciyaaraha, dhaqdhaqaaqa iyo wixii la mid ah, sidoo kalena ay dabeecadahaasi ka soo baxaan nolosha caadiga ah oo waxa laga yaabaa inaad aragto qof ku fiican ciyaaraha oo aan ku fiicnayn waxyaabaha kale.
Haddaba waxa la is weydiin karaa intee in leeg ayeynu leenahay dareen caadifadeed ama siduu u bixiyey aqoonyahan Howard Gardne emotional intelligence oo ah dareen culimada saykoolijigu daraaseeyeen labaatankii sanno ee u dambeeyey, kaas oo inta badan lagu tilmaamay inay adeegsadaan dadka nolosha guulaha ka gaadhay ama raad kaga tegey taariikhda.
Haddaba halkan ayey ka dhalanaysaa su’aasha cinwaanka mawduuca inoogu qoran ee ah imisa jir ayaad tahay? da’daadu intay doonto ha ahaato ee waxa aad ogaataa inay kala duwan yihiin dareenka u qofku xambaarsan yahay iyo da’da u jiray tusaale ahaan waxa laga yaabaa in la helo qof da’diisa ama tirsiga sanadaha u noolaa ay tahay labaatan sanno laakiin dareenka u xambaarsan yahay u gaadhayo toddobaatan sano ama qof afartan gu tirsaday oo dareenkiisu yahay 16 jir.
Dadku xirfadahoogu waxay horumaraan kolba inta waayo-aragnimo ee ay leeyihiin , caqligooduna wuxuu ku horumaraa siday aqoonta u raadsadaan laakiin waxa marag ma doon ah oo u cilmo nafsiguna ka jawaabay in aanay labadaasiba midho dhal noqonayn haddii aanu qofku lahayn dareen damqasho badan ama caadifad sare xambaarsan,( high emotional feeling )sababta oo ah waxa ka dhasha dareenkaasi arrimahan soo socda:
• Wuxuu ku farayaa noqo qof naftiisa u soo jeeda, dareenkaaga keen hortaada, weydii naftaada maxaad la diiqadootaa, maxaad saaxiibkaa, xaaskaaga ama ehelkaaga ula muran taa si cadho leh, weydii naftaada tallaabooyinka aad qaadaa ma qaar toosan baa mise waxay u baahan yihiin toosin dhinac kasta leh haday tahay akhlaaq iyo dhaqan .
• Wuxuu kuu sheegayaa dareenkaasi in aad hagaajiso fal celintaada oo dhan oo aad ka dheeraato inay dadnimadaada cid kale gacanta ku dhigo, ka xorow dhammaan baahiyaha habrashada keena iyo wixii la mid ah, ha isku arkin inaad tahay qof aan ku haboonayn meesha aad joogto ama shaqada aad hayso ku kalsoonoow naftaada iyo aqoontaada ka dib si dhiiran oo aan leex leexad lahayn u fuli go’aanadaada.
• Dareenkani wuxuu ku leeyahay naftaada dhiiri geli una sheeg haddii ay wax weyn xaqiijiso inay abaalmarin helayso aad adigu siinayso una hanbalyaynayso.
• Si xoog ah ula fal gal dadka kale, halkooda is dhig, dareen waxyaabaha ay dareensan yihiin, ha ku dhiiran inaad afka iyo adinka wax ku yeesho isku day inaad gacan qaban karto iyo in kale haddii ay kuu suurtoonbi weydana la wadaag dareenkaaga murugaysan.
• Baro sida dadka loola xidhiidho, isku day in aydaan qofna is diidin, ku dedaal dhoolo cadaynta farxada, sheeko wadaaga iyo tixgelinta dadka kale, isku arag inaad tahay qof lagu dayan karo, kana dheeroow xumaanta inaad samayso si aanay sharaftaadu hoos ugu dhicin .
Lasoco cadadka danbe OO aan kusoo qaadanayno maqaalo xiisa badan.